Mgbanwe ihu igwe ga-eme ka nri nri ghara ịrụ ọrụ nke ọma | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbanwe ihu igwe ga-eme ka nri nri ghara ịrụ ọrụ nke ọma
Mgbanwe ihu igwe nwere mmetụta na-emebi ihe na ụdị ndụ dị iche iche, oke ọhịa, mmadụ na, na mkpokọta, na akụ ndị sitere n'okike. Ọ nwere ike na-emetụta n'ụzọ kpọmkwem na-emebi ma ọ bụ na-emebi akụ ma ọ bụ n'ụzọ na-enweghị isi site na usoro nri.
N'okwu a, anyị ga-ekwu maka ya mmetụta nke mgbanwe ihu igwe na usoro nri. Kedu ka mgbanwe ihu igwe si emetụta usoro nri anyị na?
1 Mụọ na usoro nri
2 Ndị kachasị emetụta mgbanwe ihu igwe
Mụọ na usoro nri
Emeela nchọpụta na Mahadum Adelaide nke chọpụtara na mgbanwe ihu igwe na-ebelata arụmọrụ nke usoro nri n’ihi na ụmụ anụmanụ na-ebelata ikike ha nwere iji akụnụba ha eme ihe. Nnyocha e mesiri ike na mmụba nke CO2 bụ maka acidification na ọ bụ mmụba a ga-eme ka mmepụta n'ọtụtụ akụkụ nke yinye ahụ.
Ewezuga nchọpụta a, o kpebikwara na mmụba nke okpomọkụ nke mmiri ga-akagbu mmepụta na akụkụ ndị ọzọ nke usoro nri. Nke a bụ n'ihi nrụgide nke mmiri na-agba n'oké osimiri. Ọ bụ ya mere obere obere nsogbu ga - eji pụta na nri nri nke ahụ ga-eme ka mbibi ya.
Ngbaji a n’etiti ihe oriri nwere ike ibute nsonaazụ dị egwu maka usoro okike mmiri, n’ihi na n’ọdịnihu oke osimiri ga-enye obere azụ maka ma mmadụ oriri ma anụmanụ anụmanụ ndị nọ n’akụkụ ahụ kachasị elu.
Ndị kachasị emetụta mgbanwe ihu igwe
Iji hụ mmetụta nke mgbanwe ihu igwe na usoro ihe oriri, nyocha ahụ weghaara agbụ nri dị mma, na-amalite site na osisi chọrọ ọkụ na nri iji too, obere invertebrates na ụfọdụ azụ na-eri ibe ha. Na nyocha ahụ, ekpughere ihe oriri a na ọkwa nke acidification na okpomoku yiri nke a tụrụ anya na ngwụsị narị afọ. Nsonaazụ bụ na nnukwu ikuku carbon dioxide kwalitere uto nke ahịhịa. Osisi ndị ọzọ, obere obere invertebrates na ihe ndị ọzọ, azụ nwere ike ito ngwa ngwa.
Otú ọ dị, ịrị elu okpomọkụ na-agbanwe agbanwe mgbe nile nke mmiri na-akpata Azụ anaghị eri nri nke ọma ya mere ha enweghị ike irite uru nke ike sitere na osisi. Ọ bụ ya mere azụ ji agụ agụụ na ka okpomọkụ na-abawanye, ha na-amalite ibelata anụ ha na-eri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Mgbanwe ihu igwe ga-eme ka nri nri ghara ịrụ ọrụ nke ọma
Childrenmụaka nde 175 ga-emetụta mgbanwe ihu igwe kwa afọ